Dowladda Soomaaliya oo mowqif adag ka qaadatay in ay xiriir la yeelato Yahuuda – Somali Top News
Dowladda Soomaaliya oo mowqif adag ka qaadatay in ay xiriir la yeelato Yahuuda
Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya wax xiriir ah la yeelan doonin Yahuuda sidoo kalena qof Yahuuda taageersan uusan u shaqeyn Karin Dowladda Federalka Soomaaliya.
Cabdinuur Maxamed oo soo xiganaya qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay Agaasimaha xafiiskii Wasaaraddda Arrimaa Dibadda ee uu ku taageerayay in xiriir lala yeesho Yahuuda kaa oo xilka laga qaaday maanta ayaa waxa uu Cabdinuur xusay in Yahuudu ay yihiin cadow Gumeysi ku haya muslimiinta reer Falastiin waxaana uu sheegay iney xoog ku heestaan masjidka Barakeysan ee Qudus.
#Israel inta ay dhul dad #Muslimiin ah iyo magaalo barakeysan xoog ku haysato iyo inta ay xabsiga dusha ka furan ku hayso reer #Falastiin wax xiriir ah nama dhex mari karo, qof walba oo fikirkaas qabana kama shaqeyn karo, umana shaqeyn karo Dowladda Federaalka Soomaaliya. https://t.co/0NzdgcMseE
— Abdinur (@AbdinurMA) March 31, 2019
Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada ayaa sidoo kale xaqiijiyay in xilka laga qaaday Agaasimahii Xafiiska Wasiirka Arrimaha Dibadda Cabdullahi Dhool kaa oo sheegay in Soomaaliya ay xiriir la yeelan karto Yahuuda.
← Agaasimihii Xafiiska Wasaaradda Arrimaha Dibadda oo xilka laga qaaday
Magaalada Muqdisho oo qarka u saaran iney ku dhacdo shirqool loo maleegey →
General Indhacade oo sheegay waxa keeni kara in ciidamada ay dib u gurtaan iyagoo aan dagaal ku jirin
Hay’adaha arrimaha Soomaaliya ka shaqeeya oo xafiisyo ka furanaya Muqdisho
Ciidamda dowladda oo Al shabaab kala wareegay deegaano dhaca Shabeelaha Hoose